Kungenxa yokuba ibizwa ngokuba yiMicrostation V8i-Geofumadas
Ikhaya/ezintsha/Ngenxa yokuba ibizwa ngokuba yi-Microstation V8i
Ngenxa yokuba ibizwa ngokuba yi-Microstation V8i
Namhlanje, njengoko besikhe sabhengeza, i-Bentley yasungula inguqulelo yayo ye-8i kuyo yonke imveliso yeephothifoliyo, nge a iphepha elitsha ngaloo njongo, ngevidiyo kunye nezimvo zabasebenzisi obahlukeneyo. Nangona uninzi lweekhonkco kwiindawo zokushicilela ezithumele zinedilesi ye-ftp engalunganga.
Ndiyakhumbula ukuba ingxelo ka-2001 ye-AutoCAD yayibizwa ngo-2000i, andikhumbuli ukuba kutheni, ndicinga ukuba "yayifana" nango-2000, iMicrostation V7 j yabizwa xa bephumeza uphuhliso eJava ... ukuba kwi-V8 bayilahla ngenxa yeNET ngaphakathi unyaka wonke umntu uya kuthetha nge-V8i, inyani. Phambi kokuzama, ndiza "kutshaya" ngentsingiselo ye i, ngokusekwe kuluntu olusithumeleyo namhlanje emva kwenkomfa ebonakalayo, intle kakhulu kodwa kunxibelelwano lwe "ola" kwezi ndawo kuye kwacotha.
Ukuhlanganiswa Kubonakala ngathi ligama elichaza ubuninzi benkampani ephethe le nguqulo, nangona bekulindelwe ixesha elide, iyaqondwa ngoyilo ngokutsha abalwenzileyo kuzo zonke izicelo zeCreole kwaye bafumana phantsi koyilo olunye. Nangona bendinethemba lokuba ivela kwingcinga "U bulumko"Nangona benomdla kuwo kumaxwebhu abo amaninzi, andicingi ukuba bawasebenzisile kuwo onke amanqanaba, njengoko i-AutoDesk ibonakala yenza kakuhle kwisibonisi sokutshintsha ukusuka kwi-CAD kuye kwi-BIM.
Kodwa kufuneka ndiboniswe, ukukhululwa kunye nemfihlelo eninzi kufuneka kusekelwe ekulindeni okukhulu, ngoko baye baqalisa mali esilinganiselwe Iikopi ezilinde ukufumana izimvo, ukuba ndinenhlanhla omnye uza kuza, ukuba akunjalo ... Ndizokulinda ukuba zindixelele.
Uyilo lwemodyuli olusekwe Ingqondo:
Uyilo kunye nokubonwa kuncitshiswa kwisenzo esinye, oku kuthetha ukuba ukuhanjiswa kwexesha lokwenyani kukusuka kwimigca yokuqala yesakhiwo esimexekileyo kunye neArhente zoQinisekiso, ukuya kulwakhiwo lwayo lokwenyani lokulawula kunye noyilo loomatshini.
"Iiseti zokubonisa" ziyandiswa, kangangokuba i-2D iyayeka ukubakho okanye ubuncinci ihlale kunye ne-3D ... ???
Akucaci kakhulu, kubonakala ngathi babekhangela indlela yokulayisha i-2D.
Ulungelelaniso lwe-Geo Intrinsic:
Iyaqondwa into yokuba ngoku, zonke izixhobo ze-Bentley zixhasa kwaye zingaboniswa phantsi kwenkqubo enye yesalathiso-kwi-the-fly, akunandaba nokuba zivela ziphi izicelo zangaphandle ... ngaba kuyaqondakala ukuba phantsi kwemigangatho ye-OGC?
Kuvakala ngathi yi-Hulk eluhlaza, kodwa le yindlela abasebenzisi abayithethileyo: "ifayile ye-20 mb iye yafikelelwa yaza yaphathwa amaxesha angama-55 ngokukhawuleza". Kuhlala kubonakala ukuba oku kungaphaya kolawulo lwedatha nge-LAN kunye ne-WAN, apho iSharePoint kunye neProjeke Wise yomelele.
Nangona siyincoma, le ayisiyonto intsha, kunoko ityala kuba sasiqonda ukusebenzisana kungekuphela ngenxa yokuba ifunda iifomati zobumelwane kodwa kuba ixhasa imigangatho. Ke ngoku babanga ukuba balungile: i-LandXML, i-OGC, i-ISO 15925, i-WML, i-IFC… okanye ubuncinci yile nto iphepha elimhlophe elinamaphepha angama-21 libonakala ngathi lithetha njalo.
Ngandlela-thile sifuna ukwazi ukuba kukho Ezintsha, ukuba ihlala i-V8, iyayihlonipha imigangatho kwaye iyabelana ngayo ukuze abo bakhuphiswano bakwazi ukugcina imali ebiza iindleko "zokungenisa / i-eport" ezilula. Ikwabonakala ngathi licebo elilunge kakhulu, emva kweminyaka emalunga nemithathu yokufunyanwa kwezinto, hayi ukufaka isoftware kodwa ukuyiphuhlisa kwakhona phantsi koyilo olunye.
Ngoku iza kubonakala ukuba bayasikhusela kwaye bayithengise njani.
Imigca yeContour ngeGoogle Earth-Contouringge okanye AutoCAD
Ukuhlaziywa kweMifanekiso ebonakalayo yaseSpain